Ikhaya IZITOLO Zase-AFRAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseNigeria I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Egcwele yenkanyezi yebhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Kel'. I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Yethu kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye.
Noma nini igama elithi Kelechi Iheanacho likhulunywa emibuthanweni yemidlalo yebhola, lokho abantu abakubonayo ngukuthi ubani onenhlanhla yokuzitholela ekamelweni lebhola lebhola lezinyawo esemncane kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, vala uqale.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Kwengane Ekuqaleni
U-Kelechi Ihenacho wazalelwa ngo-3 Okthoba 1996 edolobheni laseObogwe esifundazweni sase-Imo, eNigeria ngu-Elder James Ihenacho (uBaba) noLate Mercy Ihenacho (umama). Wayenguye indodana yokugcina nengane yesithathu evela emndenini wezingane ze-4 (Abazali bazala izingane ze-3 Boys neNtombazane).
Ukuqala, uKelechi wadlala ibhola nsuku zonke nabafowabo nabangane bakhe emgwaqweni nasesikoleni sakhe. Ibhola yilapho efuna ukuyenza njengengane. Abafowabo bakhulile nabo badlala ibhola futhi babenomusa kakhulu kodwa babengenakuqokwa njengomfowabo omncane. Ngesinye isikhathi, bamnikeza lonke usizo ayeludinga emva kokubona ukuthi kwakuyikusasa lakhe. U-Iheanacho wayengeyena nje ohlakaniphile njengomdlali webhola lezinyawo. Wayengomunye wabafundi abathathu abahle kakhulu ekilasini lakhe phakathi nezinsuku zakhe e-Nursery and Primary school. Okokuqala, ukusebenza kwakhe kwezemfundo kwakuyizinto abazali bakhe ababethanda kakhulu kunokuba angakwazi ukugijima ibhola kahle kakhulu.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Imidlalo Yokubukela Imidlalo Premier League
Umndeni wakhe wayeneTV, kepha wayengeke afinyelele imidlalo ye-Premier League ngaleso sikhathi lapho esemncane kakhulu. Lena inkinga evamile eNigeria. Ukuphela kwendlela yokubona imidlalo kwakukhokha inani lama-20 amasenti ezikhungo zokubukela ibhola ehlakazekile ezweni lonke.
UKelechi akakwazanga ukukhokhela imali enjalo ngaso sonke isikhathi. Ngezinye izikhathi, uzoxoshwa uma engakwazi ukukhokhela imali edingekayo ukuze abukele le midlalo ephilayo. Emuva ngaleso sikhathi, wayengumuntu oqinisekisiwe we-Chelsea Fan. Njengoba uKelechi Ihenacho ebeka, "Kwadingeka ngicindezele ukubukela i-EPL njengengane ngoba ngesikhashana, angikwazi ukukhokhela imali yesango le-N50 (20) esangweni lokubuka eduze kwendlu yami. Lapho kwenzeka leso senzakalo, ngezinye izikhathi ngangingena ezindlini zokubuka noma ucele indlela yami ukuze nje uthole umbono wezenzo. Kwakungekho indlela umzali wami ayengayithola ngayo imali yokubhalisela ku-DSTV, ekhombisa i-Premier League"- Wembule.
UMTHETHO WABANGANI ABASIMTHETHE NGAPHAMBI NGOKUNGENYE UMSEBENZI WOKUBHALA I-FOOTBALL-"Babengazi ukuthi nguye ozobe ebuka esibukweni eminyakeni embalwa kamuva"
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Umkhumbi wokuphuma eMpofu
U-Kelechi Ihenacho udinga ukuphuma ebuphofu futhi wathola ibhola njengendlela eyodwa kuphela engamenza abe mkhulu. Wayenethemba kuphela into eyodwa. Ukukholisa abazali bakhe, (ikakhulukazi ubaba wakhe) ukwamukela nokuxhasa amaphupho akhe futhi bashiye iqiniso lokuthi 'Ukuba neMfundo kwakuwukuphela kwesihluthulelo sempumelelo'.
Lesi ngeshwa asihambanga kahle ngoba abavumelani ngokwezifiso. Ngesinye isikhathi, wazimisela ukuthi uyinhloko yendlu futhi waxwayisa indodana yakhe yokugcina ukuba ingalokothi iphakamise ibhola endlini yakhe. Wamncenga ukuba agxile kuphela ekufundeni kwakhe. Ngezikhathi ezimbalwa, abazali bakhe babezomshayela ukuba badlale ibhola emini kusihlwa kunokufunda izincwadi zakhe nokwenza izabelo zakhe.
Ngokusho kukaKelechi, ..."Bobabili ubaba nomama babengifuni ukuba ngidlale ibhola ngokugcwele. Bangitshela ukuthi amathuba okukwenza kube mkhulu kakhulu futhi kungaba ukuchitha isikhathi uma sekuphela ukuphishekela okungenasithelo njengoba kwenza intsha eningi yaseNigeria. Babefuna ngigxile kuphela ezifundweni zami futhi ngithole imfundo enhle. Ngenxa yalokhu, nganginesikhathi esincane sokudlala ibhola futhi ngingadlala kuphela esikoleni. Ngezinye izikhathi ngizohamba kude nekhaya ngizodlala ibhola ngesikhathi sokuhlwa ukuze bangiboni. Isimangaliso senzeke ngosuku oluthembekile. Ubaba washintsha umqondo lapho uthisha wami wesikole efika endlini yami ukuthi amtshele ukuthi ngimkhethile ukumela ithimba lesikoleni emncintiswaneni wombuso. Wavuma ukuthi ngiye ngimele lesi sikole. Ukuthi kwakuyithuba elilodwa kuphela futhi lokugcina engizothola kuye ukufakazela ukuthi ngiyakwazi ukuzenza ebhola. Ngidlale umncintiswano njengokuphila kwami ​​kuxhomeke kulo. '
Ithimba likaKelechi Ihenacho linqobe umncintiswano wombuso futhi waba ngumdlali webhola lezinsizwa ezithembeke kakhulu embusweni wakhe. Lokhu kwenza ubaba wakhe waziqhenya kakhulu futhi wabonisa ukuguquka kokuqala komsebenzi wakhe.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Uhambo oluya Ekukhuleni
Ubaba kaKelechi Ihenacho wamukele isinqumo sakhe sokuphishekela ibhola futhi waqala ukumsekela ngokushesha lapho efunda indodana yakhe inqobile umklomelo webhola legolide, imindeni kanye nezikhuthazo eziningana ezivela kumkhomishana wezemidlalo wezemidlalo. Lo mvuzo wanikezwa kuye uthisha wezemidlalo wezemidlalo njengoba kuboniswe esithombeni. Umklomelo wayo wokuba inkanyezi yomqhudelwano womncintiswano wezikole zikahulumeni ngemuva kokusebenza kanzima okukhulu.
Lapho eqiniseka futhi eqaphela ukuthi uzokwenza impumelelo ekuphileni ngokusebenzisa ibhola. Umdala uJacob Ihenacho (uBaba wakhe) ngokushesha ubhalise indodana yakhe esikoleni esingcono kakhulu sezemidlalo esifundazweni. Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba indodana yakhe ibhaliswe egatsheni likahulumeni laseLagos laseTaiye Football Academy e-Owere, inhloko-dolobha yase-Imo, e-Eastern Nigeria.
Lesi sikhathi sasiyonke ngokuncintisana kwebhola likazwelonke elibhekiswe enhlokodolobha yaseNigeria, e-Abuja. U-Kelechi owadlalela izwe lase-Imo wayaziwa ukuthi uyinkosi yabo.
Uhole iqembu ukuba liphumelele emincintiswaneni eminingi yezwe. Uthole ukuqashelwa kwezwe lapho ehola iqembu lakhe lezwe ukuze anqobe umncintiswano omkhulu wezentsha e-Abuja, ekhaya laseNigeria. Kusukela ngaleso sikhathi, wonke ama-scouts asekhaya aqala ukugcina amehlo abo aqaphele kumfana omncane. Futhi, akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba akhethe ukumelela iNigeria ngezinga labo le-U14. Impumelelo eqhubekayo yabona eqhubekela phambili ezingeni le-U17 lapho akhipha ithalenta lakhe emhlabeni.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -I-BIG Turning Point
Umqhudelwano wakhe wokuqala wokuqala waba yi-2013 African U-17 Championship eMorocco, lapho ebophe khona inqola yokulwa neBotswana. Uzinikezele imigomo yakhe ku-2013 African U-17 Championship eMorocco, unina, owadlula izinyanga ezimbili ngaphambi komqhudelwano.
U-Kelechi Ihenacho waba ngumdlali oshayisayo kakhulu emhlabeni ngemuva kokuvotelwa njengomdlali we-Adidas Golden Ball Award ku-2013 FIFA Ngaphansi kwe-World Cup 17.
Ukusebenza kwakhe kwaholela ekuthandweni kwamakilabhu eYurophu; Amaqembu alandela ukuqhubeka kwakhe ahlanganisa i-Arsenal, iManchester City, Sporting Clube de Portugal nePorto. I-Confederation of African Football (CAF) ibize ngokuthi yiTalent Most Talent Yonyaka ka-2013 kuma-CAF Award.
Ube eseduze nokuya ePutukezi eceleni uPorto kuze kube yilapho uJakobe emtshela ukuthi uzoba nekusasa elikhanyayo e-Etihad Stadium.
Ukuvumelana naye, "Ngidlale imidlalo embalwa ekupheleni kwe-Under-17 World Cup, futhi ngilapho ngivumelana khona neDolobha. Ngokwethembeka konke, ngangingazi ukuthi kuningi ngeqembu ngaleso sikhathi. Ngangisayine ukusayina i-FC Porto lapho ngifuna ukuhamba ngempela. Ngangikholelwa ukuthi ngizoba nekusasa eManchester City. Kodwa ubaba wakholwa futhi wanginika ukuzethemba engangikudingayo. Ngiyajabula ngathola iseluleko sakhe. "
Wanezela: "Ngaqala ukuzwa isithakazelo sikaMasipala lapho nginabo eNigeria ngezimfanelo ze-World Under-17," esho. "Lapho sesiqedile inqubo yokuqeqeshwa, nginezilinganiso ezimbalwa ezazisondela kimi futhi ngitshela ukuthi ngineqembu elincane elinesithakazelo sokungena ngemvume. Ngangijabule kakhulu futhi ngifisa sengathi ngingabhalisela bonke. Ngangijabulela ngempela ibhola lami ngaleso sikhathi. "
WayenguManchester City owafaka isicelo sokumsayina lapho efika ngosuku lwakhe lokuzalwa lwe-18th. Ngaphandle kwemali ekhokhelwa iTayye Football Academy eNigeria, ubaba wakhe wakhokhelwa ngamaphilenti angu-300,000 (142 Million Nigerian Naira) ngendodana yakhe njengoba athembisiwe ngabadlali abavela eqenjini elicebile.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Kelechi Ihenacho uvela e-Eastern Nigeria, isifunda esilawulwa yisizwe esikhuluma isiGigbo. Uyise, u-Elder James Ihenacho ungumthengisi owayesebenze ngezinto zokwakha e-Owere, enhloko-dolobha yaseNigeria yase-Imo. Manje useyinduna yendodana yakhe nomphathi wakhe.
Ungumuntu owake wakholwa emfundweni futhi wayelokhu efuna izingane zakhe ngaphambi kokuba zijoyine naye emkhakheni wokuhweba.
Ngaphambi kokuba indodana yakhe iphumelele ebhola, u-Elder James wayesebenza emndenini ophansi. Namuhla, ucebile futhi manje usezakhamuzi zakuqala zezwe lonke ngenxa yokuthi uNkulunkulu usebenzisa ibhola lakhe ukuze alondoloze umndeni wakhe. Ungumuntu owenza isinqumo esiphezulu lapho efika ekuphatheni indodana yakhe futhi efaka indlela yokusebenza yendodana yakhe. Isinqumo sika-Ihenacho sokujoyina iLeicester City ngokudluliselwa kodwa hhayi ngesikweletu kwakuyisinqumo esenza uyise wakhe.
Ngamazwi akhe ..."Uzohlala eManchester City ngaphansi kwePep. Ngimtshele ukuthi angavumelani nanoma yiziphi izinhlelo abazozenza ukuze bamthumele ngaphandle kwemali mboleko. Lokhu akukona lokho engavumelana nabo lapho beyisayina indodana yami. Kungakhathaliseki ukuthi uqhubeka ephikisana nabashayeli bephrofayli abaphezulu bathanda I-Aguero kuleli qembu noma bamthengisa kwelinye iqembu. " Umdala James Iheanacho ulandise engxoxweni abe nayo ne-AfricanFootball ngaphambi kokudluliselwa kwendodana yakhe eLeicester.
AmaLots ayaziwa ngobaba wakhe kodwa umama wakhe omncane. Lokhu kungenxa yokuthi usephuzile. UMnuz Mercy Ihenacho (umama kaKelechi Ihenacho) ushone ngemuva kokugula okuncane lapho indodana yakhe ingu-14 ubudala. Ukushona komama we-43 oneminyaka engu-4 kwashona kakhulu emndenini wakhe lapho izindaba ziqhekekile.
"Kungani mina ?," UCelechi ubambe umqeqeshi wekhanda, uManuel Garra (MFR) kanye nezinye izikhulu, njengoba bephule izindaba kuye. "Kungani lokhu kwenzeka kimi? Kungani mina? Kungani manje? .. Umama wenza okuningi kithi ikakhulukazi futhi ngidabukile kakhulu ngalokhu. Ngikhuluma naye ngesonto eledlule ngeSonto futhi ngangijabula ngokuthi ulungile, sicela ungitshele ukuthi ufile! " uyakhala. UCelechi Iheanacho uchaze ukuthi umama ulahlekelwe yilokho okulahlekelwa yilokho. Uzinikezele imigomo yakhe ku-2013 African U-17 Championship eMorocco, unina, owadlula izinyanga ezimbili ngaphambi komqhudelwano.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Umdlali webhola elibhekene necala eliphakeme kunazo zonke eNigeria liye lakhishwa kwabesifazane. Ngaphandle kokungabaza, uKelechi Ihenacho angathanda ukuhamba nenkosikazi engakwazi ukumelela ubuntu bakhe emhlabeni webhizinisi lokubonisa. Ukhona ebuhlotsheni kodwa engakabonakali ukuthi intombazane yakhe noma amantombazane angubani emphakathini.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Uthando Lothando
Iqiniso liwukuthi noma ubani ongumshayeli waseNigeria ukuphola cishe uyowela esigabeni somuntu othandwayo emphakathini. Nazi amakilasi amane amantombazane u-Iheanacho angase afike;
1. Umlingisi: Njengomdlali we-Super Eagles u-Ike Uche nomdlali we-Nollywood u-Uche Jombo owakhulume okwesikhashana, umfana osemncane ungase abe nokulinganisa izinketho zakhe ekukhipheni inetha lakhe olwandle olusuka embonini yamafilimu yaseNigeria, ikakhulukazi le nkathi lapho abadumile bekuthole ukuthandana ngokuthakazelisayo.
2. Indodakazi yababiliyoni: Impumelelo. bathi, unabazali abaningi, yingakho wonke umuntu angathanda ukuhlanganyela nalo. Ngakho uma ecabangela ukushada, indodakazi yendoda ecebile ingenye yezindlela ezingcono eziza engqondweni. Yilokho okwenzeka kuMikel Obi no-Olga Diyachenko.
UMikel Obi uhamba no-Olga Diyachenko, indodakazi yenkosikazi yaseRashiya no-Iheanacho bangase babheke indlela kaDoc Cuppy, indodakazi kaFemi Otedola.
3. I-Queen QueenU-Iheanacho naye ungalandela ukuhola kowayeyena owayengumphathi we-Super Eagles uJoseph Yobo owafaka indandatho eminwe kaMnuz Adaeze Yobo owayeseNigeria futhi bobabili beqhamuka kusukela ngaleso sikhathi. Ubuhle bamazinyane eNigeria ngeke busho umdlali kumdlali we-Iheancho ezweni lebhola lezinyawo.
4. Umama ongumama: Abaningi bebhola bangase bathande umqondo wokushada kepha bangafisa amathuba okuba nomama ozokwenza noma yini ukuze baphathe umntwana wabo. U-Mario Balotelli udadewethu ubexabana nomgadli weSuper Eagles u-Obafemi Martins futhi baba nomntwana ndawonye. U-Iheanacho angacabanga ukuthi asikho isono sokubeka omunye udadewabo webhola lezinyawo ngendlela yomndeni.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Iminithi Ngomlando Wezinhloso
Ngezinhloso ze-14 ekubukeni kwe-35 ngesikhathi sakhe semantombazane eNgilandi, i-Iheanacho iphetha i-2015 / 16 ngezinhloso ezinhle-isilinganiso ngasinye ngomzuzu noma yiliphi umdlali ku-Premier League, ngokulinganisa umgomo wonke amaminithi we-93.9.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuvuselela uMenzi Wakhe
U-Iheanacho ulandela izinyathelo zikaNwankwo Kanu ku-Premier League. Manje umkhiqizo omkhulu webhola we-Owerri - idolobha eliseningizimu yeNigeria. Ikhaya lomdlali we-Premier League u-Nwankwo Kanu.
U-Iheanacho uthemba ukuthi umsebenzi wakhe ungabakhuthaza labo abazithola beqala ukuthobeka okufanayo lapho akhule khona.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts - Ukuqala Kwakuqala eMan City
U-Iheanacho ujoyine iSikoleni sikaManchester City ngo-10 January 2014. Ngaphambi kwenkathi ye-2014-15, i-City yavakashela e-United States ngehora langaphambi kwenkathi, kanti nakuba isengakadlali isidlali saseMadolobheni, wajoyina iqembu. Udlale futhi wahola emdlalweni wokuqala wohambo, ukunqoba kwe-4-1 ngokumelene ne-Sporting Kansas City, futhi waphinde wabamba ngokumelene neMilan ngo-5-1 ukunqoba. Ngemuva kokuphela kohambo, uManchester City uhlele i-Iheanacho ukuba ibe yingxenye yeqembu lokuqala.
Ukuzibophezela kwakhe nokuzikhandla kwakhe ukuphoqa isiteleka kuye kwaphoqelela ukuba athathe isondo lokuqala leqembu ngaphambi kwabadlali be midfield njengoSamir Nasri obhekene nokulimala kwakhe ukulimala sekuye kwaqhubeka isikhathi esithile manje. Eqinisweni, abaningi bakholelwa ukuthi ukuthandwa kuka-Edin Dzeko kwaxoshwa ukuze kuvezwe indlela yokuthola amathalenta abasha afana naye ithuba lokusasa.
U-Iheanacho uqale ngokudlala ngokuzikhandla kwe-4-0 Emirates FA Cup e-Aston Villa ngoJanuwari olandelayo, okwenza umphathi uManuel Pellegrini ahlabelele "Kakhulu, abanamakhono kakhulu" Umncintisi udumisa ngesikhathi esigcwele. Ukuphumelela kwakhe eManchester City kwaholela eLeicester endaweni enomphela kanye nenombolo efanele yekhwele kulesi sikwele.
I-Kelechi Iheanacho Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts - Abangane Abavuzayo Abahlala Naye
Njengoba ujoyina iManchester City futhi waziwa ukuthi uthola okungaphezulu kwe-40 million yeNaira yaseNigeria ngesilinganiso seviki, into eyodwa iqinisekile eNigerian Star; 'Kumele akhokhe i-Homage kubantu abayibonile emuva ezweni lakubo'.
UKelechi uye wabhadela ngempela izinkokhelo zakhe. Uhlanganisa amaphuzu ezindlu eLagos ukuvuza abangane ngokusekela kwabo nobungane kuye uma engelutho.
Isithombe ngezansi sibonisa abangane bakhe abakhulu kakhulu eNigeria ngokuvakashela indlu kaHulumeni yase-Imo. Lapha, bahlangana noMbusi we-Imo State, eNigeria, u-Owelle Rochas Anayo Okorocha.
Ukuqhaqha okukhulu kukaKel, njengoba abangane bakhe bembiza ngokusuka enkundleni, baqala ukufaka ithemba elivela kubadlali abasha ababhekene ne-football yonkana e-Afrika. Ngokusho kukaKelechi, ...
'Ngicabanga ukuthi izingane eziningi ekhaya zakhuthaziwe yilokho okwenzekile kimi nokuthi ngikuphi namuhla. Abakwazi ukukholelwa lokho engikuzuzile ngesikhathi seminyaka engu-19 kuphela futhi kubenza banikeze inkolelo yokuthi bangayenza futhi. '
"Ngithemba ukuthi ngingabonisa ukuthi bangakwenza noma yini. Noma nini lapho ngibuyela ekhaya eNigeria manje, ngiletha njalo isikhwama esigcwele amahembe kaManchester City izingane. Uma uya ku-Owerri manje, uzobona izingane eziningi zidlala ezitaladini, zimboze okwesibhakabhaka. I-Nigeria inabalandeli abaningi be-Premier League, futhi bayoba nokuningi njalo lapho ngiya ekhaya. "
Usuku olushintshiwe: Septhemba 27, 2020